Lego Ideas ပရိသတ်တွေက The Office US ကိုအုတ်တွေနဲ့မြင်ချင်ကြတယ်
Lego Ideas ပရိသတ်များက The Office ကိုအုတ်ဖြင့်ကြည့်ချင်ကြသည်။ နောက်ထပ်ပရောဂျက်တစ်ခုက 10K သို့ရောက်သည်
05 / 03 / 2021 05 / 03 / 2021 ခရစ် Wharfe 1443 Views စာ0မှတ်ချက် 21302 Big Bang သီအိုရီ, 21319 ဗဟို Perk, Ideas, Lego, Lego Ideas, Seinfeld, ဟာသဇာတ်လမ်း, အဆိုပါရုံးမှ, အမေရိကန်ရုံး
ဒီရုံးကိုပြန်ကြည့်ချင်တဲ့ဆန္ဒ Lego US sitcom ကိုအခြေခံသောအခြားစီမံကိန်းတစ်ခုသည် ၁၀ ကီလိုဂရမ်အမှတ်အသားကိုဖြိုခွဲလိုက်ပြီဖြစ်သောကြောင့်အုတ်များသည်အခြေခံအားဖြင့်အဖျားတက်နေသည် Lego Ideas.
ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအဆင့်သို့ရောက်ရှိရန် Dunder Mufflin ၏လှောင်ပြောင်သရော်မှုအားဖြင့်မှုတ်သွင်းထားသောပဉ္စမအယူအဆနှင့်ဤပြန်လည်သုံးသပ်မှုတစ်ခုတည်းတွင်ဒုတိယအနေဖြင့်အဆအဆမြင့်တက်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဤသည် ၂၀၂၀ ပြန်လည်သုံးသပ်မှု၏ ၃၇ ကြိမ်မြောက်စီမံကိန်းဖြစ်ပြီးဒုတိယ ၂၀၂၀ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအရယခင်စံချိန်ထက်ကျော်လွန်သွားသည်။
SoGenius106 ထက်ပိုမိုရင်းနှီးသော setting ကိုပိုမိုကျစ်လစ်သိပ်သည်းချဉ်းကပ်သောချစ်ရာသခင်သည်စီးရီး၏ဤအနက်ကိုနောက်ကွယ်မှတည်ဆောက်သည် Jaijai Lewis ၏ပုံစံ။ ဒါကနှင့်အတူ - စောင့်ရှောက်ခြင်းပါပဲ Lego 21302 The Big Bang Theory နှင့် 21319 ဗဟို Perk (နှင့်, ယူဆရလာမည့် Seinfeld အစုံ) ။
သို့သော်၎င်းသည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များမှဝေးကွာသွားသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ပြသသူများအတွက်နက်ရှိုင်းသောဖြတ်တောက်မှုများစွာရှိသည်၊ အဆိုပြုထားသောဇာတ်ကောင်များ၏ smorgasbord အထိဖြစ်သည်။ (တကယ်တော့ p ယူဆတာဟာတရားမျှတတယ်art အကြောင်းပြချက်၏ Lego တရား ၀ င်အစုံပါ ၀ င်ရန်လိုအပ်သည့်အသေးစားပုံသဏ္amountာန်များအုပ်စုသည် Office အတွက်ယခုအချိန်အထိမသွားပါ။ )
ယခုရုံးသည် ၂၀၂၁ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုတွင်အခြားစီမံကိန်း ၃၆ ခုနှင့်ပူးပေါင်းပြီးဆိုလိုသည် Ideas အသင်းအနေဖြင့် ၄ င်းတို့၏လက်များပေါ်တွင်အမှန်တကယ်အလုပ်တစ်ခုရှိလိမ့်မည်။ (ဒီဇိုင်းမန်နေဂျာဆမ်ဂျွန်ဆင်၏ တောင်းပန်ပါတယ် ကြားဖူးကြပြီမဟုတ်) ။ ဒီမှာစာရင်းအပြည့်အစုံ
SpaceX Starship နှင့် Super Heavy (BFR)
VIA ရထားလမ်းကနေဒါ - ကနေဒါ
ကျွန်တော့် LEGO Totoro
Alberobello ၏ Trulli
အဆိုပါအရောင်အသွေးစုံ Express ကို
တိရိစ္ဆာန်ကူးခြင်း: New Horizons ပရဒိသု
နာဆာ၏ SLS & Artemis
Metroid: Samus Aran's Gunship
Hyrule Castle (Zelda ၏ဒဏ္Legာရီပုံပြင်)
ကရာတေးကလေး“ Wax On, Wax Off”
Scania နောက်မျိုးဆက် S730
၄- လီတာ ၁၉၂၇-၃၁ Bentley 'Blower'
Asterix နှင့် Obelix
အဆိုပါ Simpsons - အဆိုပါ Krusty ဘာဂါ
The X-Files: ငါယုံကြည်ချင်တယ်
သခင်ဘုရား Afol နှင့်အနက်ရောင် Knights ၏ရဲတိုက်
ကျွန်ုပ်တို့ထဲမှ: Skeld အသေးစိတ်မြေပုံ
← ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Lego ထွက်ကြည့်ရှုပါ Ideas 21326 ယနေ့ Winnie the Pooh ပြန်လည်သုံးသပ်
Lego ကိုငါတို့မြင်ရမလား Star Wars: အနာဂတ်အားကစားပွဲတွင် Skywalker Saga? →